Rehefa Tsy Mahita Asa Ireo Mpifindramonina Ao Espaina, Mihazakazaka Mivarotra Labiera Eny Amoron-dalana Ny sasany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jona 2016 14:30 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, Español, Português, Français, Español, English
Pikantsary avy amin'ny fanadihadiana “Labiera an-dalambe”
Ireo fako-na labiera ambifotsy mihanaka manaraka ny lalana falehan'ny olona ao Madrid, tsy misy n'inon'inona intsony. Tsy ho ela ny mangirandratsy dia handoko ho menamena ny lanitra eo ambony nefa toa zara raha foana ny barrio. “Tsy misy matory ao Madrid raha tsy efa matiny ny alina,” hoy i Ernest Hemingway, Amerikana mpanoratra nanoratra tamin'ny taona 1932 mikasika ny renivohitr'i Espaina, ary mbola mitoetra ho marina hatrany ireo fijeriny efa ho taompolo valo taona taty aoriana.
Manohy mivezivezy etsy sy eroa amin'ireo làlana rarivato mikintaontaona mpiliba, raha toa ireo lehilahy mpandraoka fako manomboka ny marainan'izy ireo manadio izay tavelan'ny botellón nandritra ny alina – fiteny ao Espaina midika hoe “tavoara lehibe” sady fiantso mahazatra ny fandehanana mivoaka misotrosotro miaraka amin'ireo namana any ivelan'ny trano.
Tsy izy ireo irery no efa mifoha maraina amin'izao vao mangiran-dratsy izao. Fa eo koa ireo mpivarotra amoron-dalana manantena hanao varotra ampitsanganana farany amin'ireo sarety feno labiera. Ireo hafa manavatsava amin'ny lalany manerana ny manodidina mba hikaroka mpanjifa, maneno ao anatin'ny harona entin'izy ireo ireo tavoahangy ambifotsy. Maro no mpifindramonina mitodi-doha amin'ny varotra labiera an-tselika rehefa tsy mahita asa mihintsy izy ireo.
Isaky ny faran'ny herinandro, sehatra tahaka ireo foana no hita – sy rehefa alina mandritry ny herinandro ihany koa – ao Madrid sy manerana an'i Espaina. Mameno ny plazas eraky ny tanàn-dehibe ireo tanora mba hiaina fotoana mahafinaritra, ary misarangotra miasa mafy mba ho velona amin'ny fivarotana labiera ho azy ireo kosa ireo mpivarotra amoron-dalana.
Fanadihadiana fohy iray navoaka vao haingana tamin'ny Vimeo no manolotra ny mpijery ny iray amin'ireo mpivarotra ireo: Hashem, lehilahy iray avy ao Bangladesh izay milaza fa efa nivarotra labiera tao Madrid nandritra ny dimy taona izy.
Noraketina an-tsary tamin'ny taona 2015, mampiseho an'i Hashem ilay “Road Beers” an'i Dennis Harvey, ahitàna azy mivarotra labiera andro sy alina, miasa mandritra ny ora maro mba hahazo vola halefa ho an'ny fianakaviany. Hashem, izay milaza fa mpikambana ao amin'ny filankevitra monisipalin'ny tanàna iray fony izy tany Bangladesh, manazava fa tonga tao Espaina izy taorian'ny fiovàn'ny governemanta nitarika ho amin'ny herisetra.
Milaza izy fa nitady asa hafa, nefa tsy nahita mihintsy. “Tsy tiako ny mivarotra labiera,” hoy ny filazany tamin'ilay mpanatontosa sarimihetsika, saingy “mila vola ho alefa aho.”
Tsy ara-dalàna ny famarotana labiera sady mety hiteraka fahazoana sazy hatramin'ny 150 euros (mitovy amin'ny 167 dolara amerikana) na mihoatra. Milaza i Hashem fa imbetsaka voasazin'ny mpitandro filaminana, nefa tsy mahita vola izy handoavana azy:
Matetika, alain'ny mpitandro filaminana [ny labiera] ary mitaky onitra izy, mandray sady mampandoa onitra, noho izany tena henjana ity asa ity.
Tsy manana taratasy mazava i Hashem ary milaza fa manantena hahazo fonenana ara-dalàna indray andro any mba ho afaka hitsidika ny fianakaviany tsy misy ny tahotra ho voasakana tsy afaka hiverina ho any Espaina mandritra ny dia miverina. Eo ampiandrasana izany, amin'ireo antso amin'ny finday sy Facebook no fomba ifandraisany.
Tsy vaovao akory io trangan-javatra io. Ny marina, enina taona lasa izay nitafa tamùinà mpivarotra roa tahaka izany avy ao Shina aho ho anà tantara iray navoaka tamin'ny tambajotram-baovao iraisam-pirenena Global Post. Lehilahy antsoina hoe Yu no nilaza tamiko fa tsy manana taratasy sy asa matotra, tsy nanana safidy hafa ankoatry ny fivarotana labiera izy mba handoavana ny trosany nivangongo nohon'ny fifindramonina nankany Espaina.
Tao Shina, nilaza izy fa, jerena ho sahala amin'ny toa firenana afaka anaovan-javatra i Espaina, nefa tsy mifanaraka amin'ny zavatra nandranndrainy ny tena zava-misy marina.
Ary i Liu, vehivavy iray izay namela ny zanany lahy kely any Shanghai, nilaza fa nanomboka nivarotra labiera teny andalana mba ho ala-nenina farany taorian'ireo toerana nisy azy toy ny mpanampy mpitaiza zazakely sy ny tsy nampanjary ny asa naha-mpiandraikitra toeram-pivarotana kely iray azy. “Vao ny andro voalohany nahatongavako dia nanenina tamin'io aho,” hoy izy:
Tsy te hanao zavatra tsy ara-dalàna izahay. Tsy te hanao izahay, saingy voatery manao izany.
Tamin'izany fotoana izany, teo andalam-pitotonganana ny toekaren'i Espaina noho ny olana ara-toekarena tafakatra tamin'ny faratampony tamin'ny 2013 nahitàna tsy an'asa manakaiky ny 27%. Hatreo, niarin-doha tsimoramora ny firenena, saingy mbola nitohy ho iray amin'ireo avo indrindra ihany ny tsy fanana asa tao anatin'ny Firaisambe Eoropeana (na dia ambany kokoa aza ny tena isan'ireo tsy an'asa mitaha amin'ny fanisàna ofisialy, vokatry ny asa miafina tsy voamarika).
Nandritra ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2016, 19.81% no isan'ireo tsy an'asa ho an'ireo mizaka ny zom-pirenen'i Espaniôla, araka ny Fanarahana Maso ny Hery Mpamokatra nataon'ny Ivontoerana Nasionaly Espaniôla misahana ny Antontanisa. 29,72% ho an'ireo mpifindramonina, izay manome ny 10% amin'ny mponina 46,5 tapitrisa eo amin'ny firenena. Mahatratra hatramin'ny 33,18% ny vahiny tsy an'asa, raha avahanao tsy hiaraka ao ny mponina avy ao amin'ny Firaisambe Eoropeana.
Manohitra an'io olana goavana ara-toekarena io, miady amin'ny firongatry ny fivarotana labiera amoron-dalana hatrany hatrany ireo tomponandraikitra. Ireo mpivarotra, etsy andaniny, tsy mitsahatra ny mivarotra hatrany.
Tsy manao ampihimamba tanteraka amin'io fomba fanao io ireo mpifindra-monina. Niresaka taminà Espaniôla iray mpivarotra labiera amoron-dalana ny mpanoratra ny bilaogy antsoina hoe No Tengo Curro (Tsy Manana Asa Aho), tamin'ny volana May 2015 sady nampita ny torohevitr'ilay rangahy mikasika ny fomba hahafahan'ireo mpiray tanindrazana aminy, lahy sy vavy tsy an'asa, ho tafiditra ao anatin'ilay fandraharahàna. Ao anatin'ity fanehoankevitra iray eto ambany ity, manamarina ilay mpanao bilaogy fa tsy mahafantatra izay mety hitranga raha toa ny olona iray, rehefa tratra, tsy mandoa sazy, saingy tazoniny ny hoe aleo manao zavatra toy izay tsy manao na inona na inona:
Aza matahotra ry zalahy, tsy misy zavatra hitranga eo, izao e, eny, hisy io, raha tsy miezaka miatrika ny fiainana ianao eto amin'ity firenena ity ianao, dia tsy hihinana.
Ao Madrid, nampitomboin'ny governemanta regionaly avo roa heny ny sazin'ny fisotroana toaka imasom-bahoaka, 300 lasa 600 euros (manakaiky ny 670 dolara amerikana) tamin'ny taona 2012, saingy tsy nahafoana ny botellones izany. Mihodikondina eo amin'ny 45% eo ny tahan'ny tanora tsy an'asa eo amin'ny firenena, ary amin'ny ankapobeny dia karazana asa azo atao fa kely karama sy tsy misy fiarovana no manome tolotra fampidirana mpiasa. Ahazoana tombony kokoa ny fandoavana euro iray ho an'ny labiera iray amin'ny mpivarotra amoron-dalana sady mifandom-bera miaraka amin'ireo namana ao amin'ny plaza iray, noho ny fandoavana faktiora amin'ny labiera iray ao amin'ny trano fisotroana.
Araka izany amin'izao fotoana izao, mbola misy foana ny labiera amoron-dalana ao Espaina.